Asturnaanta, Kali ahaanshaha, COVID-19, Trump, Telecommuting ... Tim Cook ayaa ka hadlay waxaas oo dhan shalay | Waxaan ka socdaa mac
Asturnaanta, Kali ahaanshaha, COVID-19, Trump, Telecommuting ... Tim Cook ayaa ka hadlay waxaas oo dhan shalay
Shalay, Tim Cook wuxuu wareysi khadka tooska ah ku qaaday barnaamijka Bandhigga Atlantic, halkaas oo uu awood ugu yeeshay inuu si daacadnimo leh uga hadlo arrimo ay ka mid yihiin Teleworking iyo muhiimadda ay u leedahay cudurkan faafa ee ay abuureen Coronavirus. Xiriirka aad la leedihiin Donald Trump ama muhiimada sirta gaarka ah ee adeegsadayaasheedu u leeyihiin Apple. Wareysiga wuxuu qaadanayaa ilaa laba saacadood, laakiin waxaan kuu keenaynaa xilliyadii muhiimka ahaa.
Markasta oo uu Tim Cook la hadlo warbaahinta, wuxuu abuuraa buuq badan. Isagu ma aha shaqsi wax badan ka dhima wareysiyada intaas dheer oo had iyo jeer wuxuu leeyahay jawaabo xiiso leh oo ku saabsan su'aalaha aan ahayn tiknoolajiyada saxda ah. Looma baqo, in kasta oo uu caqli leeyahay, markii wax laga waydiiyo siyaasada wadankaaga ama xaqiiqooyinka bulshada ee muranka dhaliyay.
1 Tim Cook wuxuu ka hadlayaa cabashooyinka Monopoly ee ku saabsan shirkadda uu masuulka ka yahay
2 Tim Cook iyo xiriirka uu la leeyahay Trump
3 Muhiimadda shaqada telefonka iyo gaar ahaan hadda faafa
4 Asturnaanta shirkadda Apple. Dhagaxa Filosoofiga ee Tim Cook
Tim Cook wuxuu ka hadlayaa cabashooyinka Monopoly ee ku saabsan shirkadda uu masuulka ka yahay
Mawduuca ah baaritaanka keligiis ah taas oo ku socota Apple, Google, Facebook iyo Amazon, Cook wuxuu yiri:
Waxaan u maleynayaa in shirkadaha waaweyn ay mudan yihiin baaritaan. Waxaanan u maleynayaa in taasi kaliya aysan cadaalad ahayn laakiin ay muhiim u tahay nidaamka aan ku leenahay Mareykanka. Marka wax dhib ah kuma qabo in Apple la galiyo mikroskoobka oo dadka ay baaraan oo ay baaraan. Rajadaydu waxay tahay sida dadku u maqlaan sheekadeena oo ay u sii maqlaan sheekadeena, waxay u noqon doontaa wax iyaga u muuqda sida aan taas yeelno ma haysanno kali-keli ah. Halkan kaligiis kuma jiro.
Waxaan ku jirnaa suuqyo aad iyo aad u tartan badan. Markii aan ka hadlayno taleefannada casriga ah, saacadaha casriga ah, kiniiniyada iyo kumbuyuutarrada, waa dagaallo waddooyinka ka dhaca si loo arko cidda suuqa wax badan uga qayb qaadanaysa. Istaraatiijiyaddeenna asaasiga ah ee shirkad ahaan waa inaan ku fiicnaano tayo ahaan tiro ahaan.
Tim Cook iyo xiriirka uu la leeyahay Trump
Xiriirka uu la leeyahay Trump, agaasimaha guud ee Apple wuxuu qeexay wadahadalkaaga aad la leedahay inuu yahay mid gaar ah oo aan rabin inay galaan si ay ugala hadlaan ama u xusaan waxay ka hadleen. Laakiin isagu wuxuu rabay inuu cadeeyo hal shay, taasna waa inay fiican tahay inaad ka mid noqoto wada hadaladaas intii aadan ka mid noqon.
Waxaan u maleynayaa inay aad ugafiican tahay kaqaybqaadashada, ama waad ku heshiin kartaa arrin ama waxaan u maleynayaa inay xitaa ka sii muhiimsan tahay ka qaybqaadashada markaad wax isku khilaafto.
Muhiimadda shaqada telefonka iyo gaar ahaan hadda faafa
Tim Cook aad uma jecla in Apple ay tahay shirkad ka shaqee meel fog, sikastaba ha'ahaatee waxaa jira qorshayaal cayiman oo sifiican u shaqeynaya. Muxuu Cook cad yahay in arrimuhu aysan sidii hore ahaan doonin. Xaaladda hadda jirta, ayuu yiri, in aysan ahayn sidii hore oo kale oo aanad filan karin ama dalban karin in qofku ku laabto shaqada xafiiska, xaaladdan oo kale.
Daacadnimo dhan, maahan sida jir ahaan oo kale. Marka ma sugi karo in qof walba uu ku soo laabto xafiiska. Uma maleynayo inaan waligeen noqoneyno sidii aan ahaan jirnay maxaa yeelay waxaan ogaanay inay jiraan waxyaabo run ahaantii si wanaagsan u shaqeeya. Waxaan u qorsheynay xafiiskeenna oo dhan si ay u jiraan goobo guud oo dadku ku kulmaan oo ay uga hadlaan waxyaabo kala duwan. Jadwal uma sameyn kartid waqtiyadaas.
Marka waxaan qabaa in inteena badani aan sugi karin ilaa aan dib ugu laabanno xafiiska. Waad ogtahay, waxaan rajeynayaa in taasi dhacdo mararka qaarkood sanadka dambe, yaa garanaya dhab ahaan waxa taariikhdu noqon karto. Waxaan haynaa inta udhaxeysa 10 ilaa 15 boqolkiiba maanta xafiiska. Waxaan sidoo kale xafiiska ku jiraa waqtiyo kala duwan oo usbuuca ah, laakiin aqlabiyadda, 85 illaa 90 boqolkiiba shirkadda, wali meel fog bay ka shaqeeyaan.
Asturnaanta shirkadda Apple. Dhagaxa Filosoofiga ee Tim Cook
Cook wuxuu kujiray wareysiga oo uu xiiseynayay inuu xoojiyo mowqifka Apple ee asturnaanta iyo inuu cadeeyo taas Wuxuu arkay dhibaatooyinka ka iman kara intaan shirkadaha ama dawladaha badankood xitaa ka fikirin. “Waxaan u aragnaa asturnaanta xuquuq aasaasi ah oo bini’aadam, xuquuq aasaasi ah oo aadanaha. Iyo aragtideena, hadaad ka eegto aragtida Mareykanka, waa aasaaska xorriyadaha kale ay jiraan.
Tan iyo markii Apple la aasaasay, waxaan marwalba danayn jirnay arimaha gaarka ah ee dadka. Sababtoo ah waxaan aragnay maalinta, ma ahan sida saxda ah ee ay u dhacday, laakiin Waxaan aragnay in dunida dhijitaalka ahi ay awood u leedahay inay baabiiso waxyaabaha u gaarka ah. Marka waan ogahay inaan xoogaa jasiirad ah tagnay. Waxaa jira dad badan oo imanaya jasiiradda, taas oo aad iiga farxinaysa, laakiin waxaannu qaadannay go'aanno kala duwan oo ka duwan kuwii ay shirkadaha kale qaateen.
Cook wuxuu sii waday inuu ka hadlo Coronavirus, dabka ka holca California iyo kaalmada maaliyadeed ee loo soo diray si loo yareeyo. Wuxuu kaloo ka hadlay deegaanka, oo ku saabsan mashruuca "DACA", oo uu abuuray Obama oo uu ula jeeday soo galootiga Mareykanka. Haddii aad rabto inaad aragto wareysiga oo dhameystiran, waxaad ku sameyn kartaa fiidiyowgaan aan hoosta kaaga tagi doono. Wanaaggu wuxuu bilaabmaa daqiiqada 15.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Asturnaanta, Kali ahaanshaha, COVID-19, Trump, Telecommuting ... Tim Cook ayaa ka hadlay waxaas oo dhan shalay
U dir nuxurka Mac-kaaga adoo adeegsanaya AirPlay barnaamijka 5KPlayer ee bilaashka ah
Muuqaalka ayaa imaan doona bisha Oktoobar iyadoo muuqaal cusub lagu sharfayo macOS Big Sur